Top 5 Digital Camera Blogs na Photography News Blogs
Ịzụta Nduzi Igwefoto
by Kyle Schurman (Edebere)
Blọọgụ igwefoto nwere ike ịbụ isi iyi nke ozi banyere ese foto ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ. Ị nwekwara ike ịchọta ozi dị na blọọgụ ndị dị otú ahụ maka ihe ndị ọzọ nwere ike iji nweta ngwa ngwa maka igwefoto dị ugbu a, nakwa ihe ọmụma gbasara nwere ike icheta. Maka foto ndị nwere ahụmahụ, ịnweta ụdị ozi a nwere ike inyere gị aka ime ihe ka ukwuu n'ime ọrụ foto gị.
Ọbụna foto ndị na-enweghị uche na ndị ọhụrụ na-ahụkarị ihe na-akpali mmasị na foto blọọgụ akụkọ. Ndị blọọgụ dị otú ahụ ga-enye gị ohere ịnweta ụdị igwefoto dijitalụ dijitalụ, na-akọwapụta ụdị ngwa ngwa igwefoto ọhụrụ na ụfọdụ n'ime teknụzụ ọhụrụ ị nwere ike ịtụ anya ịhụ n'ọdịnihu dị nso na ahịa igwefoto dijitalụ.
N'ezie ma ọ bụrụ na ị na-achọ ndụmọdụ gbasara foto, ozi gbasara teknụzụ igwefoto dijitalụ, ndepụta nke foto kachasị mma dijitalụ, ma ọ bụ nyochaa dijitalụ dijitalụ, Ụlọ Ọrụ Ihe Ntanetị nwere ike inye ihe niile ị chọrọ! Naanị pịa njikọ ndị a edepụtara ebe a iji hụ ozi dị na saịtị a.
Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ozi ọhụrụ kachasị na ụwa nke ese foto dijitalụ, ebe a bụ blogroll nke igwefoto dijitalụ dị elu na foto blọọgụ foto. Na mgbakwunye na ozi ahụ gụnyere na Ihe ese foto, saịtị ndị a nwere ike inye ụfọdụ ozi ọma ka ị na-anwa ịmatakwu banyere foto maọbụ ka ịchọrọ ozi iji nyere gị aka ịhọrọ igwefoto kachasị mma maka mkpa gị.
The Steve's DigiCams saịtị na-agụnye blog na n'ihu peeji nke, nke na-ekiri niile nke ọhụrụ dijitalụ ozi na ozi. Nke a bụ nnukwu saịtị na-eleta n'oge igwefoto igwefoto emeputa ahia, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime teknụzụ teknụzụ kachasị ọhụrụ esitere na ihe ngosi ndị a, ị ga-ahụkwa ozi niile dị mkpa ebe a!
Ebe nrụọrụ weebụ nke Darkroom nke Steve bụ ihe enyemaka ọzọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ akụkọ na-abụghị ndị isi gbasara igwefoto, ihe ntanetị foto, na foto. A na-egosipụtakwa ụfọdụ usoro ihe osise dị mma n'ebe a kwa, nwere ike ịkọwa ụfọdụ echiche maka ihe ọhụrụ na foto na-achị iji gbalịa. Ọzọ "
Nyochaa Digital Photo
Ebe a dị arọ na ozi igwefoto di ọhụrụ, nke kachasị mma. The blog na-emekwa ka ndị ọbịa na-adị ọhụrụ na ndị ọhụrụ na-ebipụta magazin, ụdị ọhụrụ igwefoto na nkọwa. Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ozi gbasara ọfụma ọ bụla nke igwefoto, DP Review bụ ebe dị mma ileta.
Ebe nrụọrụ ahụ na-agụnye nri Twitter, nke na-agụnye ozi ndị ọzọ na nghọta gbasara ụwa nke foto na igwefoto igwefoto dị ọhụrụ. Ọzọ "
E nwere nnukwu nchịkọta akụkọ gbasara igwe foto dijitalụ ọhụrụ, yana ozi gbasara ihe omume ihe nkiri na-aga n'ụwa nile na webatara Blog Blog. Otu n'ime atụmatụ kachasị mma banyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi foto a bụ na ụfọdụ n'ime ozi achọtara ebe a dị iche ma sie ike ịchọta ebe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese foto nke na-enwe mmasị na-arụ ọrụ na ngwà nghazi ihe oyiyi ma na-edezi ihe oyiyi gị, ụlọ ọrụ Blog Blog na-agụnye ihe ole na ole gbasara arụmọrụ nhazi oyiyi, nke nwere ike isi ike ịchọta na saịtị ndị ọzọ. Ọzọ "
PetaPixel Web saịtị nwere nnukwu nchịkọta nke foto foto na ya blog. Otu n'ime akụkụ ka mma nke blog a bụ na ọ na-enyekwa ọtụtụ ozi banyere akụkọ ihe mere eme nke foto, nke bụ akụkụ dị mma nke blog a. Ị ga-ahụ ọtụtụ foto nke akụrụngwa akụrụngwa akụkọ, yana ozi gbasara ihe ngosi nka na-egosi ihe metụtara ụwa nke foto.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmasị na foto ndị ọkachamara, nakwa dị ka ikekwe na-amụta otú ị ga-esi mee ka ntụrụndụ gị bụrụ ụzọ iji nweta ego, blog a nwere ezi ndụmọdụ site n'oge ruo n'oge. Ọzọ "
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ihe ọhụrụ ngwa ngwa nke DSLR ngwa ngwa, foto Bay Bay nwere ọtụtụ ozi banyere ihe nkedo a dị na blog ya.
Akụkụ ọzọ mara mma nke Photography Bay bụ mbipụta nke otu foto sitere na ndị na-agụ blog. Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịhụ ọtụtụ foto dị mma ebe a, ma ị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ echiche dị mma maka ihe ị na-ese foto. Ọzọ "
Ngwaaka 8 kachasị mma iji zụta na 2018 maka $ 500
Uwe ihe ntanetị kacha mma nke 7 dị na Buy na 2018
Ezigbo igwe ego
3 GoPros kacha mma ịzụta na 2018
Kasị mma foto 4-Star
CES 2016: Ngwaọrụ ese foto egosighi
Na-eduzi kaadị SDXC kaadị
Otu esi eji otutu CSS klas na otu nwanyi
Glossary of Texting Abbreviations na Web Jargon
502 Error Nzọụkwụ Nkwụsị
The 8 Best EDC (Kwa Ụbọchị) Na-ekpuchi Flashlights na Buy na 2018
Download ma ọ bụ Gụgharịa Oge Ezumike na Egwú Egwuregwu Christmas
Chọta ngwa ngwa Gmail gị
Esi tinye na ọkacha mmasị na IE9
Mgbe-ahịa Krismas na Ịzụ ahịa Ịzụ ahịa
Ijikwa Ntọala Ịntanetị Nkeonwe na Onyeọrụ gị
Ịhọrọ Ụlọ ọrụ enyi na enyi maka nchekwa gị
Ihe Nzuzo nke Onye Mmezi Na-edezi
Otu esi achọta ozi niile site na ngwa ngwa ngwa ngwa na Yahoo Mail
Ego Ole Ka iPad Na-efu?
Kedu ihe bụ Model Model HSV?
The 8 Best GPS Trackers ịzụta na 2018 maka Hiking, Ụgbọ ala na More
Ihe Nlereanya Na-eji Iwu ahụ "More"
Kedu ihe bụ TBZ Njikwa?
Ịchọta ezigbo eriri USB 12V
Esi zoo Icon Igodo na ihe ngosi Slidehows 2007
Ihe 8 Best iPhone X na Zụrụ na 2018